प्रधानमन्त्रीको रोग लुकाउन जरुरी हो ? डा. झा भन्छन्- उहाँले भन्न चाहनुहुन्न भने कर गर्न मिल्दैन | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो हो भन्ने बारेमा चिकित्सकीय विवरणसहितको जानकारी सरकारी तहबाट अहिलेसम्म गराइएको छैन । सरकारी तहबाट स्वास्थ्य ‘ठीक छ’ मात्रै भनिएको छ तर उनलाई के भएको हो र अहिलेको अवस्था के हो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन । सो सम्बन्धी प्राविधिक जानकारी गराउने कुनै राजनीतिक नियुक्तिको मान्छेले भन्दा पनि निजी चिकित्सक टोलीले हो । तर, निजी चिकित्सक टोलीले अहिलेसम्म यसबारेमा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता ठानेको देखिएको छैन ।
नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले नै जानकारी दिन नचाहेर हुन सक्छ । जानकारी देऊ भनेको अवस्थामा त निजी चिकित्सकले जानकारी गराइहाल्थे नि । तर, उहाँले जानकारी दिन चाहनुहुन्न भने तपाईंको रोगबारे जानकारी दिनैपर्छ भनेर अरुले भन्न मिल्दैन ।”
आखिर प्रधानमन्त्रीलाई जनतासँग रोक लुकाउनुपर्ने अवस्था किन आयो त ? यसबारेमा कसैले पनि प्रष्ट जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । गएको सोमबारमात्रै सिंगापुरमा स्वास्थ्य लाभ गरेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्रीलाई फेरि सिंगापुर लग्ने तयारी भइरहेको भनेर बिहीबार चर्चा चल्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले राति ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य ठीक भएको जनाएका थिए । यद्यपि अझै विविध खालका आशंका जनस्तरमा देखिएका छन् ।
हाइ प्रोफाइल व्यक्तिको स्वास्थ्यमा समस्या आउँदा दैनिक वा दिनको केही पटक मात्रै होइन, घण्टैपिच्छे बुलेटिन नै प्रकाशित गरेर अवस्था सार्वजनिक गर्ने चलन हुने सम्बद्ध विज्ञहरुको भनाइ छ ।
डा. झा भन्छन्, “अवस्था हेरेर घण्टैपिच्छे पनि जानकारी गराउने चलन हुन्छ ।” तर, प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि सिंगापुर जाने क्रममा खास समस्या भएको हो भनेर औपचारिक रुपमा कुनै कुरा जानकारी गराइएन । त्यहाँ कुन स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइएको र केके परीक्षण कुन चिकित्सकसँग गराइयो भन्ने कुरा पनि खोलिएन ।
बाह्रखरीसँग शुक्रबार बिहान कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले बिहीबार सार्वजनिक गरेको भनाइ नै आधिकारिक भएको जनाए । उनका अनुसार आज बिहान ११ बजे आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक गर्न उनैले नेकपाको सचिवालय बैठक डाकेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाकार विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य ठीक भएको र शुक्रबार बिहानैदेखि नियमित भेटघाट र बैठकमा सहभागी हुने बिहीबार जनाएका थिए ।
बिहीबार बस्ने भनिएको नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ भएपछि शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएकोे थियो । तर, बेलुका उनको स्वास्थ्यमा थप समस्या आएको र सिंगापुर लैजाने तयारी भएको भन्ने समाचारहरु आएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाकार रिमालले उक्त समाचारहरुको बिहीबार राति नै खण्डन गरेका थिए । रिमालले ट्विटमा लेखेका थिए, “सिंगापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वदेश फर्किएलगत्तै पार्टी र सरकारको बाक्लो कामको धपेडीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केही थकित हुनुभयो र आज (बवहीबार)को सचिवालय बैठक भोलि बस्ने गरी स्थगित भयो ।“
रिमालले केही मिडियामा आएका अफवाहहरु निराधार भएको जनाउँदै लेखेका थिए, “यसै आधारमा उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बारे अड्कलवाजीसहित केही मिडियामा सम्प्रेषित अफवाहहरू निराधार छन् । प्रमको स्वास्थ्य ठीक छ । उहाँ भोलि (शुक्रबार) बिहानबाटै नियमित भेटघाट र बैठकहरूमा संलग्न रहनु हुनेछ ।” प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति निश्चिन्त रहन आग्रह गर्दै चासो राख्ने सबै शुभचिन्तकहरूलाई उनले धन्यवाद पनि भनेका थिए ।
रिमालले भनेजस्तै आज नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको छ र प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहभागी भएका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष झा आफ्नो रोग के हो भनेर कसैलाई भन्न मन लागेन भने त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भएको बताउँदै भन्नैपर्छ भनेर कर गर्न नमिल्ने जनाउँछन् । तर, कसैलाई जनताले जानन् भन्ने लागेमा नियमित रुपमा भन्ने गरेको समेत उनले उल्लेख गरे । उनको भनाइ थियो, “हाइ प्रोफाइल व्यक्तिको स्वास्थ्यका बारेमा घण्टैपिच्छे जानकारी गराउने चलन पनि हुन्छ । तर, उहाँले भन्नै चाहनु हुन्न भने कर गर्ने कुरा पनि हुँदैन ।”
प्रधानमन्त्री ओली हालैमात्र फलोअप उपचारका लागि सिंगापुर गएर सोमबार फर्केका हुन् । स्वास्थ्य ठीक छ भन्ने जानकारी गराइए पनि के भएको थियो र कतिसम्म ठीक भएको हो भन्ने बारेमा जनस्तरमा चासो देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि मृगौलाको बिरामी हुन् । उनको १२ वर्षअघि मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । कामको धपेडीको कारण देखाउँदै उनका निजी चिकित्सक समूहले प्रधानमन्त्रीलाई जाँचको लागि सिंगापुर जान आग्रह गरेबमोजिम उनी त्यसतर्फ गएर आएको बताइँदै आएको छ । तर, पहिलाको भन्दा सुध्रियो, बिग्रियो वा कहिले सम्म आराम गर्नुपर्ने वा आराम गर्नै नपर्ने भन्ने बारेमा तुलनात्मक जानकारी गराइएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका निकट सहयोगीहरुका अनुसार उनी राति १–२ बजेसम्म विभिन्न काममा व्यस्त हुन्छन् र र बिहान पनि सबेरै उठ्छन् । धपेडीका कारण उनलाई समस्या पर्न सक्ने चिकित्सक टोलीले बताउँदै आएको छ । सिंगापुर जानु भन्दा एक साताअघि उनको छाउनी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । रगत, दिसापिसाब, पेटको अल्ट्रासाउण्ड, बायोप्सी लगायतका परीक्षण सो अवसरमा गरिएको बताइएको थियो ।
उनी केही दिनसम्म सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि सहभागी नभएकोमा सिंगापुर जानुअघि भने केही कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । ६ वर्षअघि उनको हातमा समेत संक्रमण भएर समस्या आएको थियो ।
समाचारप्रधानमन्त्रीको रोग लुकाउन जरुरी हो ? डा. झा भन्छन्- उहाँले भन्न चाहनुहुन्न भने कर गर्न मिल्दैन